बा“दरमुढे ः भुल्न नसकिने दुःखद घटना – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बा“दरमुढे ः भुल्न नसकिने दुःखद घटना
२०७१ जेष्ठ १९, सोमबार ०२:१७ गते
नौ वर्षअगाडि, अर्थात् २०६२ साल जेठ २३ गते चितवन माडीको बा“दरमुढे खोलामा यात्रुवाहक बस धरापमा पार्दा ३८ जनाको ज्यान जानुका साथै ७२ जना घाइते भएका थिए । घटनाको केही समयपछि घाइते हुनेमध्येका तीन जनाको मृत्यु हुँदा घटनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या अहिले ४१ पुगिसकेको छ । माओवादीले घटाएको उक्त घटनाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्को रुपमा विरोध भएको थियो । माओवादी पार्टीले समेत एक विज्ञप्तिमार्फत युद्धको नियमविरूद्धको घटना भनी माफी मागेको थियो । यद्यपि, घटना घटाउने कुनै कार्यकर्तालाई पार्टीले कारबाही भने गरेको छैन ।
माडीको बगाईबाट भरतपुरसम्म आउनका लागि यात्रा गर्नेहरु प्रायः सर्वसाधारण नै थिए । बाँदरमुढे घटना घटेको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि घटनाले छाडेर गएको पीडामा कमी आउन सकेको छैन । घटनाका कतिपय घाइतेहरु अहिले पनि वैशाखीको सहारा लिन बाध्य नै छन् । बाँदरमुढे घटनालाई वर्षौंसम्म जीवन्त बनाई राख्नमा स्वयं माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताका बोली–व्यवहार नै जिम्मेवार छन् ।
माडीमा माओवादीहरु सुरक्षित गतिविधि मात्र गर्न चाहन्छन् भन्ने बुझाइ थियो । माडीवासीको मात्र होइन, प्रशासनको बुझाइ पनि यस्तै थियो । घटनापूर्वका अधिकांश समयमा माडीमा दुवैथरी बन्दुकको प्रभाव न्यून प्रायः नै देखिने गर्दथ्यो । यदि लडाइँबाट कब्जा गर्ने भनेको भूगोल हो भने माडीको अधिकांश भूगोलमा आप्mनै कब्जा रहेको बुझाइमा थियो माओवादी । त्यति हुँदाहँुदै पनि किन त्यस्तो जघन्य अपराधको घटना घटायो माओवादीले माडीमा ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
बाँदरमुढे घटना अज्ञानता र अन्जानवश घटेको घटना पक्कै पनि होइन । घटना योजनाबद्ध रुपमा विद्युतीय धराप थापेर घटाइएको
हो । बसको छतभरि बर्दीधारीको ठाउँमा सर्वसाधारण आएको देख्दादेख्दै पनि धरापलाई विस्फोट गराउने कार्यकर्तालाई सार्वजनिक अनि कारबाही नगरेसम्म माओवादी यो घटनाको विरूद्धमा छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन सक्दैन । माओवादी नेताहरु भाषण मात्रै गर्छन्, व्यवहारतः पीडितहरुलाई राहत मिल्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । बाँदरमुढे घटना पहिलेदेखि नै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ र टाउको दुखाइको विषय बनिरहने छ । घटनाको पीडालाई कम गर्नतिरभन्दा पनि आप्mनो तरिकाबाट व्याख्या गर्ने काम मात्र भएको छ अहिलेसम्म ।
प्रचण्डले अहिलेसम्म पनि बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग छलफल वा भेटघाट गरेका छैनन् । यसबीचमा उनी धेरै पटक चितवन पुगिसकेका छन् र एक पटक माडी नै पुगिसकेका छन् । घटना घटेको डेढ वर्षपछि फूलबारीमा लडाकुको घेरामा रहेर पीडितसँग भेट त गरे, तर दोहोरो संवाद हुन सकेन । एक अर्थमा भन्दा भेट नभएजस्तै भयो । प्रचण्डलाई कुनै पर्दामा देख्नु र फूलबारीमा भेट्नु एकै भयो, पीडितहरुका लागि । प्रचण्ड माडी पुगेर पनि बाँदरमुढे पीडितहरुलाई भेटेनन् । माओवादी पाटींले बाँदरमुढे घटनाप्रति देखाउने गरेको उदारतामाथि नै अविश्वास र आशंका बढेको छ । बाँदरमुढे पीडितहरुले दुःखेसो पोख्दा समेत चेतावनी खेप्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ । यसले पनि स्थितिको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ ।
माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्धको शुरूवात गर्दा शोषित–पीडित र गरिब जनताको पक्षमा लड्ने बताएको थियो । तर, १० वर्षे जनयुद्धमा मर्ने सबैजसो शोषित–पीडित र गरिब जनता नै भए । भएका सबै संरचनालाई ध्वंस बनाएर मात्र क्रान्ति सफल पार्न सकिन्छ भनेर लागेको माओवादीले धेरै घरपरिवारको बिचल्ली बनाइदियो, जनयुद्धको १० वर्षमा ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधानको सभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको लामो समय भैसक्यो, तर नेपालले रोम विधानलाई अझै पनि अनुमोदन गर्न सकिरहेको छैन । पीडितहरु त्यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पु¥याउन चाहन्छन् । उनीहरु रोम विधानले मात्र आफूहरुलाई न्याय दिन सक्छ भनेर भनिरहँदा किटान गरेर दोषी को–को हुन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । घटना घटेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि घटनामा क–कसको संलग्नता थियो, सार्वजनिक भएको छैन । घटना पार्टीको निर्णयअनुसार नै थियो वा कसैको लहलहैमा थियो, त्यो पनि सार्वजनिक भएको छैन । पार्टीको निर्णयबाट घटना घटाइएको भए कुन तहबाट निर्णय गरेर घटाइएको हो, र यदि होइन भने त्यसमा क–कसको संलग्नता हो, सार्वजनिक गर्नुप¥यो भन्दै घटनापीडितहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेको भए पनि माओवादी यी दुवै कुरा मान्न तयार देखिँदैन ।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि बाँदरमुढे घटनापीडितहरुले धेरै नै आशा राखेका थिए । तर, त्यो आशा लामो समयसम्म रहेन । यो घटनाप्रति माओवादीले मात्र होइन, राज्यले पनि आप्mनो पूर्ण दायित्व सम्झन सकेन । उक्त घटनाको रेकर्ड राख्ने र मृतकका परिवारलाई केही क्षतिपूर्ति (१ लाख ५० हजार) रकम दिनेभन्दा सरकारी निकायबाट अरु केही काम हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले प्रतिघाइते ५० हजार दिने भनी घोषणा गरेको भए पनि हालसम्म त्यो पैसा कसैले पनि पाउन सकेका छैनन् । घाइते र मृतकका परिवारलाई उचित राहत, निःशुल्क जीवन बिमा, तिनका सन्तानका लगि निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्ति दिने आदि व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दथ्यो ।
बाँदरमुढे घटना माओवादी द्वन्द्वको प्रतीकात्मक मूल्यमा दूरगामी मह¤वको भए पनि राजनीतिक क्रियाकलापका कारणले यसको दूरगामी मह¤वमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ, जुन कुरा माओवादीले राम्रैसँग बुझिसकेका छन् । लामो समयदेखि बाँदरमुढे घटनाको पछाडि देशी–विदेशी शक्तिको चलखेल छ भनेर आफूलाई माडीमा असुरक्षा भएको कारणबाट माडी पुग्न नसकेको बताउने प्रचण्ड दुई वर्षअघि भने सजिलैसँग माडी पुगे ।
प्रचण्डलाई माडीमा भेटेर पीडित परिवारले बाँकी रहेको आक्रोश पोख्न चाहन्थे । तर, अझैसम्म पीडितहरुको त्यही एउटा चाहना पनि पूरा हुन सकेको छैन । माडी पुगेर प्रचण्डले हुँदै नभएको ६० लाख निकासा गरेर मात्र आफू माडी आएको बताएका थिए । त्यसले पनि पीडित परिवारको पीडा झन् बढाएको थियो । पीडित परिवार पैसा होइन, न्यायको खोजीमा छन् ।
२०६२ जेठ २३ गतेका दिन युद्ध अपराधको पराकाष्ठा नाघेको दृश्य माडीको बाँदरमुढेमा देखिएको
थियो । घटना सम्झनासाथ स्वतः माओवादी पार्टी र त्यस पार्टीका अध्यक्षको आलोचना हुँदै आइरहेको छ र यसले एउटा इतिहासको आकार पनि लिइसकेको छ । घटना घटेको नौ वर्ष बितिसकेको यो समयसम्म पनि मानिसहरुले बाँदरमुढे घटनालाई अलिकति पनि बिर्सिएका छैनन् । माओवादी जनयुद्ध र त्यसलाई दबाउने नाममा हुने गरेका मानवताविरोधी सबै घटनामध्येमा यो घटना सबैभन्दा ठूलो नरसंहार र निन्दनीय घटना थियो । न्याय र राहतको पर्खाइमा बसिरहेका पीडितहरुको पीडा कम हुनुको साटो झन् बढ्दै गइरहेको छ । घटना घटेको नौ वर्ष बितिसक्दा समेत न्याय पाउन नसकेका पीडितलाई अब रोम विधान मात्र न्याय दिन सक्दछ । घटनामा को–को दोषी थिए, र तिनीहरुलाई के कारबाही भयो भनेर अहिलेसम्म पारदर्शी कुरो बाहिर आउन सकेको छैन । माओवादी नेतृत्व अहिलेसम्म पनि घटनाप्रति गम्भीर भएर लागेको देखिएको छैन ।
माओवादी पीडितहरुले अहिलेसम्म धेरै पटक नै आफ्ना मागहरु लिखित तथा मौखिक रुपमा पेस गरिसकेका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । पीडितका माग धेरै र नाजायज पनि छैनन् । पीडितहरुले घटनाका दोषीलाई माडीवासीसमक्ष सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नुपर्ने, घाइतेलाई जीवनवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मृतकका बच्चाबच्चीलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य दिनुपर्नेलगायतका दस सूत्रीय माग राखेका हुन् । तर, ती मागमध्ये अहिलेसम्म कुनै एउटै माग पनि पूरा भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पीडितको पीडा घट्नुको सट्टा बढ्दै जानु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।
बाँदरमुढे घटनाले माडीवासीको मन र मस्तिष्कमा गहिरो छाप पारेर बसेको छ । अनि, कसरी घटनाको आक्रोश कम हुन सक्छ त ? न घटनापीडितलाई राहत छ, न पीडकलाई कारबाही छ । परिवार गुमाउने वा घाइते हुने जुनै परिवारलाई पनि चित्त बुझाउने ठाउँ नै छैन । घटनाका पीडितमध्ये कतिले त घरखेत नै बेचेर उपचार गराएका हुन् । बिनाकसुर यो नियति भोग्न र देख्न परेपछि कसरी भुल्न सकिएला, बाँदरमुढे घटना ?
(अध्यक्ष, माडी अध्ययन प्रतिष्ठान)